Muhiimada Heshiiska Ethiopia iyo Ereteria (dhegayso) – Radio Daljir
Muhiimada Heshiiska Ethiopia iyo Ereteria (dhegayso)
Luulyo 10, 2018 5:53 g 0
Dawladaha Ethiopia iyo Ereteria ayaa heshiis dhawr qodob ka kooban kugaaray magaalada Asmara ee Dalka Ereteria kadib muddo 20 sano ah oo colaado ay ka dhex taagnaayeen labada dhinac.
Heshiiskaan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii uu Ereteria booqasho kutagay raisalwasaaraha Ethiopia Dr Abiya Axmed Kaasoo la kulmay madaxda dalkaas.
Haddaba heshiiskaas waxaa si wayn usoo dhaweeyey qaar kamid ah madaxda caalamka kuwaa oo sheegay inuu labada dal u saamixi doonaa fursado ay diiradda ku saaraan xiriirka siyaasadeed iyo midka bulsheed.
Dhinaca kale dadka falanqeya Arimaha geeska afrika ayaa sheegay in heshiiskan uu muhiimad wayn uleeyahay Somala oo madaxdeenna ay ka baran karaan isu tanaasul iyo dalka uu noqdo mid ka hirgala nabad waarta.
Guddoomiyaha Maxkamada sare oo daahfuray Hanaanka Gal-Dacwadeedka (dhegayso)